बुटवलमा कांग्रेसका उम्मेदवार फराकिलो मतान्तरले अगाडी, एमाले र राप्रपाको अवस्था केछ ? — Sanchar Kendra
बुटवलमा कांग्रेसका उम्मेदवार फराकिलो मतान्तरले अगाडी, एमाले र राप्रपाको अवस्था केछ ?
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरमा कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले मतान्तर थप फराकिलो बनाएका छन् । १४ सय मतगणना हुँदा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार पाण्डेले ६०३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
राप्रपाका मेयर उम्मेदवार मृगेन्द्र शेरचनले दोस्रो स्थानको मत ल्याएका छन् । उनले ३०२ मत प्राप्त गरेका छन् । एमालेका मेयर उम्मेदवार बाबुराम भट्टराई २३९ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
उपमेयरमा भने राप्रपा उम्मेदवार भगवती पाण्डेले अरुलाई पछि पारेकी छन् । पाण्डेले ३१९ मत ल्याउँदा एमालेबाट उपमेयर उम्मेदवार बनेकी सावित्रा अर्यालले २९४ मत ल्याएकी छन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेका चिनबहादुर गुरूङले २४३ मत ल्याएका छन् । गुरुङ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हुन् । यस्तै दाङको लमही नगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जोगराज चौधरीले अग्रता लिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका बसन्त राज शर्मा (विक्रान्त)ले १६८ र नेकपा एमालेका दण्डीराम चौधरीले १४६ मत पाएका छन् । मेयर पदमा कांग्रेसले अग्रता लिए पनि उपमेयर पदमा भने एमालेकी उम्मेदवार सुशिला शर्माले अग्रता लिएकी छन् ।
शर्माले १४८ मत पाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । उपमेयर पदका अन्य उम्मेदवारहरु माओवादी केन्द्रकी गंगा पाण्डेले १२३ र नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी योगीले १२२ मत पाएकी छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा लमहीको मेयरमा नेकपा एमाले र उपमेयर पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । यता ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनले अग्रता लिएका छन् ।
५० मत गन्दा महर्जनले २८ सहित सुरुवाती अग्रता लिएका छन् भने नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यन्जनकारले १० मत पाएका छन् । महर्जन अघिल्लो कार्यकालमा पनि ललितपुर महानगरका मेयर थिए ।
कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ छ भने एमाले एक्लै प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ ।